Rosa Ribas. Kubvunzana nemunyori weVakanaka Vana | Zvazvino Zvinyorwa
Rosa Ribas. Kubvunzana nemunyori weVakanaka Vana
Mufananidzo naRosa Ribas. Twitter nhoroondo.
Rosa Ribas ndiye musiki we Cornelia Weber-Weaver en Pakati pemvura mbiri, la Ma50 trilogy (atova nemaoko mana nemunyori Sabine Hoffman) rakanyorwa na Chipo Chemitauro, Iyo Yakakura Cold uye Navy Bhuruu, dzese nhema nhema. Asi zvakare saina Pension Leonardo, Detective Wakaona, Miss Makumi mashanu o Mwedzi mumigodhi. Uye ikozvino ane iyo Hernández, mhuri yevatikitivha vano nyeredzi Yese nyaya yakajairika y Vanakomana vakanaka, yakabuda gore rino.
Ndinokutendai zvikuru iyi bvunzurudzo yaakatsaurira kwandiri, mutsa wako uye kutarisisa. Mariri anotiudza zvishoma nezve zvese, kubva pakutanga kwake pesvedzero, Vachidarika yavo vanyori zvido uye zvitsva mapurojekiti iwe waronga, pamwe nekutora tarisiro kune yakazara kuburitsa nzvimbo.
Rosa Ribas - Bvunzurudzo
ROSA RIBAS: Ini handirangariri bhuku rekutanga zvechokwadi. Mavharo maviri anouya mupfungwa: Iyo nhema corsair rakanyorwa naEmilio Salgari, bhuku randinoramba ndichichengeta uye ndichichengeta sepfuma. Ini handizive kuti kangani ini ndakaverenga bhuku iri. Uye imwe ye Enid Blyton, Vese vashanu vari mumatambudziko, Ndinofunga zvaive.
Nyaya yekutanga yandinorangarira ndinofanira kunge ndakanyora pandakanga ndava nemakore gumi. Yaiva imwe inotyisa manzwiro uye inonakidza nyaya nezve nzombe iyo yanga isingade kufira muplaza. Ndinoyeuka kuti ndakazvinyora mukirasi (mudzidzisi aindiita kuti ndinyore kuitira kuti ndinyarare kwechinguva) uye ipapo ndaifanira kuzviverenga pamberi pekirasi yese. Chinhu chakanakisa ndechekuona kuti mukomana wandaida (Mhoro, Quique!) Pachivande akapukuta misodzi pakupera kwekuverenga.
RR: Kana ndikarangarira nemazvo, bhuku renyaya naPoe, iyo pamwe ndakaverenga kare uye ikandikonzera kuwanda kwehusiku.
RR: John irving. Mumwe wevanyori vandinofarira. Ini handidi inoverengeka yakareba kwazvo, asi naIrving ndinogona kuenderera kwemazana kana mazana maviri emamwe mapeji.
RR: Ndingadai ndaifarira kusangana nevakashinga musoja Schwejk, naJaroslav Hasek uye une madoro mashoma naye. Uye gadzira, Ripley, kubva Highsmith.
RR: Ini ndinonyora neruoko nepenzura. Ipapo ndinoipfuudza kukombuta
RR: Denda risati rasvika, ini ndakatanga kunyora mune cafe. Iye zvino ndakadzidza kutanga basa pa tafura yangu.
RR: Ini handina zvandinoda. ndiri muverengi akanaka ane nyonganiso uye yakavhurika kune ese marudzi kuverenga.
RR: Ndinogara ndine mabhuku akati wandei panguva imwe chete. Ndiri kuverenga Mutambi wePolish Boxer naEduardo Halfon, Zvichiri hupenyunaLouise Penny uye Aberteurliche Reise durch mein ZimmerNaKarl-Markus Gauß. En idzi nguva Ndiri kuongorora pfupi pfupi. Asi zvakawanda handigoni kuverenga.
RR: Zvakaomarara, kunyangwe pamwe hazvisi zvekuti kune vamwe vanyori, asi vanhu vazhinji vanoita pachena kufarira kwavo kutsikisa. Izvo, kune rumwe rutivi, zvinowirirana nenyaya yekuti kune dzimwezve sarudzo dzekutsikisa.
RR: Zvakanaka, nekuda kwebasa rangu, ini ndajaira kuzviparadzanisa, kushandisa maawa mazhinji mukamuri ndichishanda. Asi yakagara iri yekuzvipfigira mujeri. Zvino, mushure memwedzi yakawanda kwazvo yedenda, Ini ndinoona kuneta kwatinogovana tese. Kuziva kana ini ndikawana chimwe chinhu chakanaka kubva mune izvi, ini ndichiri kushaya maonero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Rosa Ribas. Kubvunzana nemunyori weVakanaka Vana
Moyo wandinogara nawo
Zuva iro pfungwa dzakarasika